Teacher's Farewell Pragramme
Satyawati Secondary School
सत्यवती माध्यमिक विद्यालय
ESTD. 2033 BS
Teacher’s Farewell Programme
“Good afternoon everyone, I would like to extendawarm welcome to our honorable SMC chairperson Surya Adhikari, PTA Chairperson Ram Chandra Sapkota, Principal Indra Prasad Poudel, our respected teachers, our non-teaching staff, and most importantly, to our friends 1. Gau Neupane 2. Karun Kafle, and 3. Sudip Ale whom we bid farewell today.”
Ashok Giri (Assistant Headmaster)
Karun Kafle’s speech:
“म यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो जीवनलाई मूल्यवान तुल्याउन र सम्झनाहरू सहितको झोला दिनका लागि। यहाँ उभिएर विदाई भाषण दिन मलाई सधैं दुःख लाग्छ। सम्पूर्ण संगठनले जहिले पनि डुबुल्की मार्न सक्छ। जान गाह्रो हुन्छ। म मेरा सबै विद्यार्थीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र उनीहरूको भविष्यका प्रयासहरूका लागि मेरो शुभकामना पठाउँछु। “
Sudip Ale’s speech:
“यस दिनलाई विशेष बनाउनका लागि सबै सम्मानित शिक्षकहरूलाई धन्यवाद।”
Gau Neupane’s speech:
“नमस्ते प्राचार्य, शिक्षक र सबै गैर शिक्षण कर्मचारीलाई। यहाँ यस्तो उत्कृष्ट दिनमा विदाई भाषण दिन म कृतज्ञ छु। जहाँसम्म म बिहानको बिद्यालय पढाउँछु र सामान्यतया म यहाँ आउँछु तर यो मप्रति कृतज्ञता हो। म साँच्चिकै यहाँ 28 बर्ष भइसक्यो र धेरै चीजहरू सकारात्मक रूपले परिवर्तन भएका छन्। सबै आज, मैले महसुस गरें कि कसरी समय र मूल्यवान क्षणहरू उड्दछन्। म कृतज्ञताका साथ पछाडि फर्केर हेर्छु। म युवा व्यक्तिको उनीहरूको सम्भावना प्राप्त गर्न, तिनीहरूको प्रकट गर्न वा उनीहरूको उत्तम आत्म पत्ता लगाउन सहयोग गर्न समर्पित पेशामा प्रवेश गरें। जब म यो छोड्दछु, मँ तपाईसँग धेरैजनालाई लिएर गइरहेछु। तपाईं मेरो सम्झनामा रहनुहुनेछ। मैले सँगै हासिल गरेका चीजहरू म जहिले पनि सम्झन्छु: हामीले राखेका थुप्रै सफल नाटकहरू, तपाईंले दिएका भाषणहरू, बहस र वर्षको कन्सर्टको अन्त्य।”
Address:Vyas-2, Damauli, Tanahun
Email:satyawati001tanahun@gmail.comOpens in your application